Ọnụọgụ ahịa 19 maka Email, Ekwentị, Ozi olu, na ire ere | Martech Zone
Ahịa bụ azụmahịa ndị mmadụ ebe mmekọrịta dị ka ngwaahịa ahụ, ọkachasị na ụlọ ọrụ ngwanrọ sọftụwia. Ndị ọchụnta ego chọrọ onye ha ga-atụkwasị obi maka teknụzụ ha. Ha ga-akwado eziokwu a, ma lụọ ọgụ maka ọnụahịa ka mma, mana ọ dị omimi karịa nke ahụ. Onye na-ere ahịa ahịa na onye nwe SMB ga-emekọrịta ihe, ọ dịkwa mkpa maka ndị na-ere ahịa maka nke ahụ. Ọ bụghị ihe a na-ahụkarị maka ndị na-eme mkpebi ịhapụ ihe ngosi ahịa ha na-achọghị, ọbụlagodi na ọ pụtara ịkwụ ụgwọ karịa.
Egwuregwu ochie dị na njikwa na - ekwu na onye na - ere ahịa agaghị adị akọ - dị nnọọ ezu ezu. Onye ọ bụla nọ na ahịa kwesịrị ịma bụ otu esi emechi azụmahịa ahụ. Ọ bụrụ na ha nwere ike ime nke ahụ, ndị ọzọ ga-elekọta onwe ha. Ndị na-enyere aka n’ọfịs na ndị na-akwụ ụgwọ nwere ike ilekọta ndị ọzọ. Isi ihe suut n'elu ụlọ na-eche bụ ego ole onye ahịa na-ere ahịa nwere ike iweta.
Rụ ọrụ n'ahịa na-achọkwa iche iche. Onye ọkwá nkà na-ama mgbe e wuchara ihe ma rụchaa ya. Ọrụ ha dị n’ihu ha na-ahụkwa anya. Onye na-arụ ọrụ na mgbakọ ga-ahụ ihe ha tinyere na wijetị ha nyere aka wuo, ha ga-amatakwa nkeji ole ha mechara n'otu ụbọchị. Onye na-ere ahịa enweghị ọnụ ahịa ahụ. Ihe ịga nke ọma ha na-atụle dị ka isi na egwuregwu. Ha ma na ha nwetara ya, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ọ bụghị ihe ha nwere ike imetụ ma metụta. Ihe akara ha nwere ego dollar na ego.
Ọ bụkwa na-adịghị a static ubi. Teknụzụ agbanweela ahịa dịka ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Mgbasa mgbasa ozi enyerela ọtụtụ ụzọ iji ruo ndị ahịa na ihe dịka email nwere ike ịbụ ezigbo ngwaọrụ maka ndị ma etu esi eji ya. Ihe omuma a site na Ngwa Bizness na-egosi mmetụta dị omimi na-enwe na ahịa, yana otu esi agbanwe egwuregwu ahụ.
19 Ujo ahia stats ga-agbanwe Olee otú i re
Banyere Bizness Apps
Ngwa Bizness bụ a WordPress maka ngwa ngwa mkpanaka. Ọtụtụ ndị ahịa anyị bụ ọcha labelụ ngwa creators - ahia ma ọ bụ ụlọ ọrụ imepụta ndị na-eji ikpo okwu anyị eme ihe n'ụzọ dị irè iji wuo ngwa ngwa mkpanaka maka ndị ahịa azụmaahịa obere.
Tags: bizness ngwaNkwado ire ahịaọnụ ọgụgụ ahịastats ahịaozi olu ozi olusteti ozi olu statsna-elekọta mmadụ na-erestats ahịa stats